Banaabax maanta ka dhacay magaaladda Dhahar ee gobolka Sanaag (Dhegayso) – Radio Daljir
Nofeembar 25, 2012 3:11 b 0
Dhahar, Axad Nov 25, Banaabaxa oo ay soo abaabuleen Ururrada bulshada rayidka ah ?ee magaalada Dhahar ayaa yimid kadib markii shacabka Dhahar uu soo gaaray warar sheegaya in deegaano ka mid ah gobolka ay kusoo fool leeyihiin xubno katirsan maamulka Somaliland oo olollaha doorashooyinka u imaanaya magalaada Dhahar.
Faadumo Salaad Cilmi oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Dhahar oo ka mid ah dadkii isusoo baxa muujiyay ayaa Radio Daljir u sheegtay inay diidanyihiin imaatinka xubnaha Somaliland ee doorashooyinka kasocda magaalada Dhahar.
“Waxaan u adkaysan weyney dhibaatooyinka ka jira wadanka sanad walba waxaa nagu soo duula maamulka Soomaaliland, waxaan u sheegaynaa Somaliland inay naga joojiyaan dhibaatada ay nagu wado” ayay tiri Faadumo Salaad Cilmi.
Sidoo kale waxay ?sheegtay in magaalada ay kusugan yihiin dad kasoo jeeda deegaanka oo u adeegaya maamulka Somaliland kuwaasoo u ololaynaya Ururada Siyaasada ee maamulka Somaliland.
Degmada Dhabar waxay kamid tahay meelaha gobolka Sanaag ee la isku hayo siyaasad ahaan iyadoo Maamulka Somaliland halkaasi faragelin ku sameeyeen marar badan.